Yedu kurudziro kurudziro yeiyi Nhema Chishanu 2019 | Gadget nhau
Miguel Hernandez | | Amazon, Zviitiko, General
Chishanu Chishanu chegore rino 2019 chave pedyo nekona, zvisinei, izvo zvinopihwa zvinosvika nguva dzese dzisati dzapa kupa kukuru zvidzikiso pane zvigadzirwa zvatave tichitsvaga kwenguva yakareba. Chii Gore rino kuActualidad Gadget isu tinoda kukubatsira kupfuura nakare kose, zvatichaita kuita mudiki muunganidzwa weakanakisa kurira kupihwa kwatinako kwauri, maunowana mahedhifoni, maspika masipika uye zvishoma zvese. Tsvaga nesu izvo zvinopa zvinonyanya kufadza mune ruzha rweChishanu Chishanu ichi uye tora mukana wekuvandudza zvigadzirwa zvako pamutengo wakanakisa.
1 Kygo A11 / 800 - Mahedhifoni ane ANC
2 Sonos Famba - Iye-anotenderera mutauri
3 Smart Mutauri Kumuka - Alarm Clock ine Alexa
4 Mahedhifoni kuenda kumhanya uye assorted
5 True Wireless mahedhifoni (TWS)
Kygo A11 / 800 - Mahedhifoni ane ANC
Takatanga nechigadzirwa chiri kuwedzera kukurumbira, kurira mahedhifoni kurira. Isu takave nemufaro wekuyedza izvi Kygo A11 / 800 mavhiki mashoma apfuura. Mukuongorora kwedu takawana kukosha kwakanakisa kwemari kana zvasvika kune chigadzirwa, Tine kuzvitonga kwakanaka kwazvo mumahedhifoni ayo ari kubhadhariswa kuburikidza neUSB-C kubatana uye ane kadhi yekutakura yakaverengerwa mubhokisi, kunyangwe izvi zvakapetwa zvakakwana, saka vanotora nzvimbo diki kwatinoda kuzvichengeta. Isu tine yekubata pani yemultimedia control uye zvakare 3,5mm jack kubatanidza kune analog audio.
Tenga Kygo A11 / 800
Bluetooth tekinoroji iri vhezheni 5.0 zvingaite sei neimwe nzira uye kumisikidza kuri otomatiki zvizere. Musi waNovember 28 uye kusvika Mbudzi 30, zvinowirirana neBlack Chishanu, mahedhifoni aya achange aine dhisikaundi 50% muchitoro chepamutemo cheKygo, saka ivo vachagara pa € ​​150 nekutakura kwaverengerwa, kuderedzwa kwakasimba kutora mukana wemisi iyi yakakosha. Rangarira kuti mahedhifoni aya anogona kutengwa zvese zviri chena uye nhema uye kuti ane maikorofoni maviri kuti akwanise kupindura mafoni zviri nyore.
Sonos Famba - Iye-anotenderera mutauri
Iyo Sonos Move ndeye yakasarudzika mutauri, wekutanga Bluetooth mutauri wesweden firm iyo zvakare ine mamwe ese hunhu hweSonos, senge: Kubatana neAmazon Alexa uye Google Mubatsiri, Spotify Kubatana, AirPlay 2, kuramba mvura ... Nekudaro, iyo yakagadzirirwawo kuti iwe ugone kuiisa sezvairi chero kwaunoda, nekuti izvi zvine USB-C chiteshi uye chiteshi chechaji icho chichatibvumidza kuti titore kwatinoda, kuti tigare tichiperekedzwa nesimba rinodiwa uye mhando inonzwika, senge gadheni redu kana mapato edu ane hushingi.
Tenga Sonos Famba ne € 339
Uye zvakare, Sonos akagadzirira muunganidzwa wezvipo zveBlack Chishanu neCyber ​​Muvhuro:
Sonos Imwe SL -30 €, 169 €
Gudzanzwi iri riine saizi yakaumbana uye huremu hwaive mukati tichifunga kugona kwaro. Kana tikachiisa pachigadziko chayo ndeye Sonos yechinyakare, asi kana tikaiburitsa ndokuibatanidza neBluetooth tine mutauri pasina miganho. Unogona kuona kwedu kwakadzika kuongorora uye vhidhiyo yedu kana iwe uchida kuiziva zvakanyanya. Iyo yakasimba yeSweden ichave neyayo yega yeChishanu Chishanu kutengesa pawebhusaiti yayo, kuwedzera kune izvo zvidzikisira zvatinowana mune akateedzana ezvigadzirwa zvavo zvinotengeswa kuAmazon.
Smart Mutauri Kumuka - Alarm Clock ine Alexa
Unogona here kufungidzira uchikwanisa kubvisa charger, wachi yewarm uye mutauri kubva patafura yako yemubhedha mune sitiroko imwechete? Zvese izvi uye nezvimwe Energy Sistem inokupa iwe neiyi Smart Mutauri Wake Up, mutauri akangwara iyo wachi yeawa uye panguva imwecheteyo waya isina waya yekuchaja ine Qi standard. Asi ine zvakawanda zvakawanda zvinoshanda, iwe unogona kutora mukana weayo Bluetooth 5.0 tekinoroji kana yayo Multiroom maficha kuti ugone kuibatanidza pamwe nezvimwe zvakasara zvigadzirwa zviri mukati. Nenzira imwecheteyo, isu tinowana 2.0 stereo speaker inokwana uye inopfuura kuzadza kamuri ine mimhanzi nekuda kweSpotify Connect.
Tenga Smart Mutauri Muka
Uyu mutauri anowanikwa paAmazon uye zvakare pane iyo Energy Sistem webhusaiti uko kwavanogadzira madhishu makuru eBlack Chishanu pane Smart Sepaker zvigadzirwa senge 5 Imba and the 7 Shongwe, Izvo hazvimbokuvadza kutora kutarisa kuti uone kana zvimwe zvezvinhu izvi zvinowirirana neAkiel zvinogona kuve chikamu cheimba yako. Kutendeseka, pamutengo uyu unotsiva chitsama chakanaka chezvigadzirwa izvo zvinowanzove patafura uye chichava chinenge chakakosha muzuva rako zuva nezuva, sezvo iri wachi yemaawa uye ichakuyeuchidza mangwanani ega ega kuti unofanirwa kuenda kubasa .
Mahedhifoni kuenda kumhanya uye assorted
Zvandinokuunzira izvozvi ndizvo muunganidzwa wemahedhifoni ekumhanya kana mitambo kazhinji, uye ndezvekuti parudzi urwu rwebasa harinyatsoita nemhando ipi neipi yemahedhifoni, sezvazvinonzwisisika, sezvo zvichidikanwa kuti pamusoro pekubata nzeve zvakanaka vanogona kupokana neyakajairika iyi. mhando yechiitiko. MuActualidad Gadget isu takaongorora, semuenzaniso, mashoma mashoma mahedhifoni, saka tinokusiira iwe diki muunganidzwa:
Fresh'n Mupanduki has zvakasarudzika zvakaderedzwa paEl Corte Inglés
Energy Sistem Kunze Bhokisi Mugwagwa kubva ku € 99,50
Yekupedzisira Nzeve Boom 3, imwe yeakanakisa maspika masipika pamusika pane yakanaka dhisikaundi, inogara pa € ​​84,99
True Wireless mahedhifoni (TWS)
Munguva pfupi yapfuura iyo TWS mahedhifoni ndiyo nyeredzi chigadzirwa, muActualidad Gadget isu tayedzawo yakanaka yakanaka yeiyi. Ini ndoda kutanga ndaratidza TicPods Yemahara neMobvoi, mahedhifoni ayo muvara ravo dema anongova 71,12 euros chinova chinoderedzwa chinosvika makumi mashanu kubva muzana kubva pamutengo wayo wekutanga. Iwo ese asina waya mahedhifoni ane IPX50 kuramba uye kubata kubata pakati pezvimwe zvakawanda zvinoshanda, tarisa kuongorora kwedu kana iwe uchida kuvaziva zvishoma zvakadzama.
Isuwo tinokusiyai TWS mahedhifoni kuti isu takaedza nguva pfupi yadarika uye zvakare vane zvidzoreso, ivo vanonyanya kunakidzwa kupihwa mutengo wavo.
Arbily G9: Makaralı 5.0 earbuds ane ziya kushinga, anodarika maawa makumi maviri nebhokisi rekuchaja, maikorofoni uye kudzima ruzha kukanzura, ye € 36,79 paChishanu Chishanu.
Zvakanaka, uku kwave kuri kuunganidzwa kwedu kwema speaker madiki uye mahedhifoni muActualidad Gadget yeChishanu Chishanu ichi, tinokukurudzira kuti ugare wakangwarira nekuti zvimwe zvinodhura zvinoderedzwa zvichange zvichisvika uye ticharamba tichizvitsikisa, vhiki reChishanu Chishanu rasvika kutora mukana nazvo. Kana iwe uchiziva zvimwe zvinopihwa kana uine chero mibvunzo, tora mukana webhodhi rekupindura uye kujoina yedu YouTube chiteshi, uye tevera isu mberi Twitter kana iwe uchida kuziviswa yeakanakisa nhau mu tech sphere, pamwe neazvino ongororo yemarudzi ese.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » Amazon » Yedu kurudziro kurudziro yeiyi Nhema Chishanu 2019
Isu tinobvunzurudza Fabián Gumucio, mukuru waRakuten Kobo kuSpain